I-Fungicide Factory, abahlinzeki - China Abasebenzi Bokubulala Ama-fungung
isikhunta i-Azoxystrobin 25% SC, 50% WDG, 80% WDG CAS 131860-33-8
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo Igama Elijwayelekile Azoxystrobin （71751-41-2, Elinye Igama AZX, Amistar, Quadris Molecular form C22H17N3O5 Formulation Type Azoxystrobin technical: 97% TC, Azoxystrobin Formulations: 25% SC, 50% WDG, 80% WDG Mode of Action The Imodi yesenzo ukuvimbela ukuphefumula kwe-mitochondrial ku-fungi.Ivimbela ukuhluma kwe-spore, ukukhula kwe-mycelial, nokukhiqizwa kwe-spore kwe-fungicide. Isikali Sokwakheka Kwezifo Zesicelo ...
i-fungicide Benomyl 50% WP CAS 17804-35-2
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo Igama lomkhiqizo Benomyl Imininingwane ejwayelekile Umsebenzi: Ukucaciswa kwe-Fungicide: 50% WP CAS: 17804-35-2 High high agrochemical Toxicology Oral Acute oral LD50 for rats> 5000 mg ai / kg. Isikhumba neso Acute percutaneous LD50 konogwaja> 5000 mg / kg; okucasulayo okunganakwa esikhunjeni, okwesikhashana emehlweni (onogwaja). Ukuhogela i-LC50 (4 h) yamagundane> 2 mg / l emoyeni. I-NOEL (2 y) yamagundane> Ukudla okungama-2500 mg / kg (isilinganiso esiphezulu esihloliwe), abukho ubufakazi ...
isikhunta iCarbendazim 50% SC, 50% WP CAS 10605-21-7
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo Igama Lomkhiqizo I-Carbendazim Function Fungicide Specification 98% Tech, 500g / L SC Igama Lamakhemikhali i-methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate CAS No. 10605-21-7 Empirical Formula C9H9N3O2 Toxicology Oral Acute oral LD50 for rats 6400, dogs> 2500 mg / kg. Isikhumba neso Acute percutaneous LD50 konogwaja> 10 000, amagundane> 2000 mg / kg. Okungacasuli isikhumba namehlo (onogwaja). Hhayi isikhumba sensitiser (izingulube zeginea). Inhalat ...
isikhunta i-hydroxide yethusi 77% WP
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo Igama Lomkhiqizo I-Copper hydroxide Function Fungicide Specification 97% TC, 77% WP, 50% WP Chemical Name copper hydroxide (Cu (OH) 2) CAS No. 20427-59-2 Empirical Formula CuH2O2 Toxicology Oral Acute oral LD50 for rats 489 mg / kg (ubuchwepheshe.). Isikhumba neso Acute percutaneous LD50 konogwaja> 3160 mg / kg. Iyacasula kakhulu futhi ibonakalise emehlweni, isikhumba esincane siyacasula. Inhalation LC50> 2 mg / l umoya. Isigaba sobuthi WHO (ai) III; I-EPA (ukwakheka) ...
isikhunta i-Copper oxychloride 50% WP CAS 1332-40-7
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo Igama lomkhiqizo I-Copper oxychloride Imininingwane ejwayelekile Umsebenzi: Ukucaciswa kwe-Fungicide: 50% WP CAS: 1332-40-7 I-agrochemical Toxicology esebenza kahle kakhulu I-LD50 yomlomo yamagundane ingu-700 mg / kg. I-acute percutaneous LD50 ingaphezu kuka-2000 mg / kg. Izicelo Zokusebenza Isikhunta esivikelayo esisebenza kahle, sisebenza ngokukhulula ama-ions ethusi kuma-protein ama-denature ne-anzyme enezinhlamvu zefungal. Ukulawulwa kokulimaza sekwephuzile kwamazambane, utamatisi ...
isikhunta i-Cymoxanil 50% WDG CAS 57966-95-7
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo Igama Lomkhiqizo I-Cymoxanil Function Fungicide Specification 50% WDG Chemical Name 2-cyano-N - [(ethylamino) carbonyl] -2- (methoxyimino) acetamide CAS No. 57966-95-7 Empirical Formula C7H10N4O3 Toxicology Oral Acute oral LD50 for amagundane wesilisa 760, amagundane abesifazane 1200 mg / kg. Isikhumba neso Acute percutaneous LD50 konogwaja> 2000 mg / kg. Hhayi iso ecasulayo; isikhumba esicasula kancane (onogwaja). Hhayi isikhumba sensitiser (izingulube zeginea). ...
I-Fungicide Thiram98% TC, 50% WP, 70% WP, 80% WDG
Isibonisi Somkhiqizo Imininingwane Yegama Lomkhiqizo I-Thiram 80% WP CAS No. 137-26-8 Ukucaciswa (COA) Okuqukethwe: ≥50% Ukumiswa kwesilinganiso% r: ≥75 Isikhathi sokumisa s: ≤120 MF C6H12N2S4 Imodi Yesenzo Kuyinto enobuthi obuncane fungicide, isikhumba nolwelwesi lwamafinyila kunomphumela ovuselelayo. Okuqondiwe I-Thiram isetshenziselwa ukwelashwa kwembewu ukulawula i-smut ne-bunt kakolweni, i-smut evulekile futhi emboziwe kanye ne-Typhula blight yebhali, i-powdery isikhutha, i-rusts, indawo yeqabunga nokuthatha konke kanye nempande ejwayelekile futhi ...
I-Fungicide Triazolone 95% TC, 25% WP
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo I-Triadimefon iyi-fungicide eyi-triazole esebenza kahle kakhulu, ubuthi obuncane, izinsalela eziphansi, ubude besikhathi nempahla eqinile yohlelo. Ngemuva kokumunca izingxenye ezahlukahlukene zesitshalo, ikwazi ukuqhuba emzimbeni wesitshalo. Kuyasebenza ekuvikeleni, ekuqedeni, nasekwelapheni ukugqwala kanye nempushana. Kuyasebenza ezifweni ezahlukahlukene zezitshalo ezifana nommbila ozungezayo, ukolweni, uketshezi lweqabunga likakolweni, uphayinaphu ukubola okumnyama, ikhanda lommbila smut, njll.
I-Fungicide Ziram 95% TC, 80% WP CAS 137-30-4
Imininingwane Yokuboniswa Komkhiqizo IGAMA ELIVAMILE Ziram CAS NO. 137-30-4 CATEGORY fungicide UKWAKHIWA 95% TC, 80% WP UKUPHAKELA 25kg / isigubhu noma njengoba isidingo sakho Isicelo I-Ziram iyi-fungic yezolimo ye-dithiocarbamate esetshenziswa ezinhlobonhlobo zezifo zesikhunta nezifo. Ingasetshenziswa emaqabungeni ezitshalo, kepha isetshenziswa futhi njengomuthi kanye / noma ukwelashwa kwembewu. UKUBONAKALA iphawuda emhlophe Iphoyinti lokubilisa Incibilikisi ...
I-Fungicide Tricyclazole 40% SC, 75% WP, 75% DF
Imininingwane Yesibonisi Somkhiqizo I-Tricyclazole iyi-fungicide ekhethekile yokulawula ukuqhuma kwelayisi, okungeye-thiazoles. Ukusebenza kwesenzo se-bactericidal ikakhulu ukuvimbela ukwakheka kwe-melanin enamathiselwe, ngaleyo ndlela kuvimbele ukuhluma kwe-spore nokunamathela kwesiporiyamu, kuvimbele ukuhlasela kwe-pathogen futhi kunciphise ukukhiqizwa kwerayisi blast fungus spores. Ukuhlukaniswa kwe-Fungicide Amanye amagama i-tricyclazole EINECS Cha 255-559-5 State Powder CAS No 41814-78-2 MF C9H7N3S ...
I-Amitraz 12.5% ​​EC, I-Carbofuran 97% TC, ICyproconazole 40% WDG, I-Captan 95% TC, IBifenthrin 25g / l EC, I-Azoxystrobin 20% WDG,